ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: August 2010
ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ် မစစ်စမ်းသပ်နည်း (ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်)
(၁) ဂေါတာမအား အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဟု သိလျှင် သင်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သည်
(၂) ဂေါတာမအား အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကုလားလူမျိုးအဖြစ် သိလျှင် သင်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သည်။ (သင်၏ စိတ်ထဲတွင် ဂေါတာမအား ကုလားမဟုတ် ဟုအမှတ်ဖြင့် ကိုးကွယ်နေသေးလျှင် သင်သည် ဗုဒ္ဓအစစ်တစ်ယောက်မဟုတ်ပါ
(၃) ဂေါတာမ၌ ဟိန္ဒူရသေ့ဆရာနှစ်ပါးရှိသည်ကို သင်လက်ခံနိုင်ရမည်။ (သို့မဟုတ်လျှင် ဆရာမပါ မိမိဥာဏ်ဖြင့် ထိုးထွင်းသိမြင်သည်ဟု ဆိုလျှင် သင်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက်မဖြစ်နိုင်ချေ ဆရာအာခံ အာဂေါင်းလှံစူး စကားပုံကို သင်မမေ့သင့်ပါ)
(၄) ဂေါတာမသည် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် မိဘနှစ်ဦးထံမှ မွေးဖွားလာသည်ကို သင်လက်ခံနိုင်ရမည်။ (အဘယ်ကြောင့်ဆို တကယ်ဖြစ်ခဲ့လို့ ဖြစ်သည်)
(၅) ပိဋကတ်ကျမ်းဆိုသည်မှာ ဂေါတာမသေပြီးနောက် တပည့်များနှစ်ပေါင်း ၅၄ နှစ် ၄၀၀ အတွင်းမှာ စတင်ပြုစုသည်ဟု လက်ခံနိုင်ရမည်။ (အောက်က ပိဋကတ်သုံးပုံအကြောင်းအရာ ဝီကီ၏ဖော်ပြချက်မှာ ပြန်၍ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ http://en.wikipedia.org/wiki/P%C4%81li_Canon
ဂေါတာမ(ရှင်ဟာသ ဂေါတာမ= Siddhārtha Gautama)သေပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း ၅၄ နှစ်နှင့် နှစ်ပေါင်း ၄၀၀နီးပါးခန့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ လေးကြိမ်မြောက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်စီပွဲကို ရေးသားရန်ဆောင်ရွက်မူမတိုင်မှီမှာ နှုတ်တိုက်အာဂုံဆောင်ခဲ့သည်။ (ဤဝီကီမှ ရောသော်ဖေါသော်လုပ်သွားခဲ့သည့် အကြောင်းမှာ ဂေါတာမသေပြီးနောက် ၅၄နှစ်မှာ ပထမဆုံးကောင်စီပွဲ လုပ်တယ် အနည်းကျဉ်းမျှသာ ရေးခဲ့ပါ့သည်။ ဂေါတာမသေပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ကျော်မှ ၄၀၀ အတွင်းမှ ကျမ်းကို ရေးသားနိုင်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ရေးဖို့ကျမ်းစာ၇ွက်အပြည်အစုံအလုံအလောက် မရှိနိုင်သေးချေ။ )ပါလိကမ်နူးကို ၁၉ရာစုမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ပါလိကမ်းနူးကို အထွေထွေအမျိုးအစားသုံးမျိုးဖြင့် အတွဲလိုက်ရှိသည်ကို ပိဋကတ်ဟုခေါ်ပါသည်။ ပါလိပိဋကတ်အဓိပ္ပါယ်မှာ ခြင်းတောင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုယင် ရှေးလူကြီးသူမများ၏ခေါ်ဆိုခဲ့သကဲ့သို့ ခြင်းတောင်းသုံးတောင်း ဟုခေါ်ဆိုကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဒီပိဋကတ်သုံးပုံမှာ အောက်ပါအချက်ကျမ်းများပါဝင်သည်။
၁။ ဗီနရ ပိဋကတ် (စည်းကမ်း\_ှဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်း ခြင်းတောင်း) သင်္ကန်းခြုံဂတုံးများနှင့် မယ်သီလရှင်များအတွက် လိုက်လျှောက်ရန် စည်းကမ်းနှင့် အနေအထိုင်
(၂) စူတ ပိဋကတ် (နှုတ်မြွတ်နေသော ခြင်းတောင်း) ဂေါတာမနှင့်သက်ဆိုက်သောပြောဟောချက် နှင့် သို့သော် တပည့်လက်သားအချို့ ၏ပြောဟောချက် ဖြစ်သည်။
(၃) အာဘ်ဟစ်ဓမ္မ ပိဋကတ် (အမျိုးမျိုးသော အတွေးအခေါ်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စူးစမ်းလေ့လာသည့် အတတ်ပညာ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ )
(၆) ဂေါတာမအား သင်သည် ဘုရားအဖြစ် ကိုးကွယ်နေသေးလျှင် သင်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ အစစ်တစ်ယောက်မဟုတ်သေးချေ။ သင်သည် သင်၏ဘဝခရီးအတွက်ေ၈ါတာမအား ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဆရာတစ်ပါးအဖြစ် လက်ခံထားလျှင် သင်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သည်။
အောက်ပါဖော်ပြထားသော် စာများကို ကြည့်ရှု ဆင်ခြင်ကြပါ…….
ဗုဒ္ဓ(ရှင်ဟာသ ဂေါတာမ) ဟာ သေသွားခဲ့ပြီ ထို့ကြောင့် ငါတို့ကို ဘယ်လိုကူညီနိုင်ပါသေးသလဲ????
ဖရာဒေးသည် လျှပ်စစ်ကို ရှာဖွေခဲ့သည်။သေသွားခဲ့ပြီးပြီ။သို့သော် သူ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမူသည် ကျတော်တို့ကို ကူညီနေဆဲဖြစ်သည်။(စကားချက်- Loo-ee-Past-YooR နာမည်အသံထွက်)(ပြင်သစ်လူမျိုး)လိုးရီး ပတ်စ်ရိုသည် အနာရောဂါများကို ရှာဖွေကုသပေးခဲ့သည်။သို့သော် သူ၏ဆေးပညာရှာဖွေတွေ့ရှိမူသည် အသက်များကိုကယ်နေဆဲဖြစ်သည်။ လီယိုနာဒိုဒါဗီဂျီသည် ပန်းချီပညာ၍အထူးလက်ရှာမြောက် ဖန်တီးခဲ့သည်။သူသည်သေသွားခဲ့ပြီးပြီ။သူ၏ဖန်တီးမူသည် ပျော်ရွှင်မူနှင့်တက်ကြွမူကိုပေးနေဆဲဖြစ်သည်။၊ တိုင်းပြည်အတွက် နိုဘယ်ဆုရှင်များ။သူရဲကောင်းများ သေသွားခဲ့ပြီ ဒါပေမဲ့ သူတို့၏ လုပ်ဆောင်မူများ ဆောင်ရွက်မူများကို ဖတ်နေရသေးသည်။သူတို့လုပ်ခဲ့သလို လုပ်ဆောင်ရန် ငါတို့ကိုလှုံ့ဆော်မူရှိဆဲဖြစ်သည်။ဟုတ်ပြီ ဗုဒ္ဓသည် လွန်ခဲ့သော် နှစ်ပေါင်း၂၅၀၀ ကသေခဲ့ပြီးပြီ သူ၏သင်ကြားနေမူသည် လူတွေကိုကူညီနေဆဲဖြစ်သည်။သူ၏ဥပမာသည် လူများကို လှုံ့ဆော်မူရှိနေဆဲဖြစ်သည်။သူ၏ စကားသည် ဘဝကို ပြောင်းလဲစေဆဲဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓတယောက်တည်းသာလျှင် သေပြီးနောက် ရာစုပေါင်းများစွာ တန်ခိုးရှိတုန်း ဖြစ်သည်။ (ဒါကတော့ သူ့အပြောပေါ့ဗျာ ကျတော်ဖတ်ရသလောက်ဆိုရင် ခရစ်ယာန်တို့၏ ဘုရား ခရစ်တော်နှင့် မွတ်စလင်မ်တို့၏ တမန်တော် မိုဟာမက် တို့ နောက်လိုက်ဘယ်လောက်များကြောင်း သူတို့၏စကားများကို ဘယ်လိုလူမျိုးများက နားထောင်ခဲ့ကြောင်းကို အပြိုင်အဆိုင် ပြောဆိုနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်)
ဗုဒ္ဓ(ရှင်ဟာသ ဂေါတာမ)ဟာ ဘုရားဖြစ်ခဲ့ပါသလား????
ဘုရားမဖြစ်ခဲ့ပါ။ သူသည် ဘုရားမဟုတ်ပါ။ သူသည်ဘုရားဖြစ်ရန်၊ဘုရား၏သားတော်ဖြစ်ရန် ဘုရားထံမှ တမန်တော်ဖြစ်ရန် မတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူး။သူ(ဂေါတာမ)သည် သူ့အားဖြင့်သူ ပြည်စုံသော်လူတယောက်ဖြစ်သည်။ငါတို့သည် သူ၏ဥပမာကိုလိုက်ပြီး ငါတို့ဟာငါတို့ကြိုးစား၍ ငါတို့လဲဘဲ ပြည်စုံနိုင်သည်ဟု သင်ကြားခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ဗတ်တီ စကားမှ ဆင်းသက်လာသည်၊ဆိုလိုရင်းအကြောင်းမှာ နိုးကြားရန်ဖြစ်သည်။ဗုဒ္ဓဘာသာများသည် နိုးကြားမူအတွေးအခေါ်သမားများဖြစ်သည်။ ဒီအတွေးအခေါ်သမားများသည် ရှင်ဟာသ ဂေါတာမ သွန်သင်ချက်များစွာထဲတွင် ရှိသည်။ ရှင်ဟာသဂေါတာမကို ဗုဒ္ဓဟုလဲ ခေါ်ကြသည်။သူဟာသူ ၃၅နှစ်မှာ အသိနိုးကြားမူရရှိခဲ့သည်။ဗုဒ္ဓဘာသာသက်တမ်းမှာ ၂၅၀၀ ရှိပြီ ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားမှာ သန်း၃၀၀ရှိသည်။လွန်ခဲ့သော်နှစ်ပေါင်းတထောင်မတိုင်မှီက အာရှ၏အဓိကအတွေးအခေါ်သမားများဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဥရောပ၊သြစတြေးလျ၊ အမေရိကားတို့မှာ တိုးပွားလာခဲ့သည်။ (ဖြည့်စွက် -တိုးပွားလာမူများမှာ အာ၇ှတိုက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာများ သွားရောက်အခြေချခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိူင်ငံကတော့ စွန့်လွှတ်ခဲ့သည် စွန့်လွှတ်မူ၏ အကျိုးရလဒ်က ကမ္ဘာမှာ အင်အားကြီးနိုင်ငံတခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ တိုးပွားလာသည့်နိုင်ငံများတွင်တော့ ဆိုးကျိုးများ ရရှိခံစားလာရသည်။)
ဤအထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအ၇ာတို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္ဘာ့သာဿနာပြု ဘုန်းကြီးများ၏ ၀ဘ်ဆိုဒ်များမှ ဖော်ပြရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီအကြောင်းအရာကို ရေးဖို့ ပေးပို့ပေးသော သူငယ်ချင်းအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
(၇) ဂေါတာမထံတွင် ဆုတောင်း၍ ရနိုင်သည်ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ဆိုလျှင် သင်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက်မဖြစ်သေးချေ။ (ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ သက်ဆိုက်ရာကျမ်းဂန်များထဲတွင်လည်း ဂေါတာမထံတွင် တောင်းဆိုကြသော်သူအများရှိခဲ့သော်လည်းပဲ ငါသည်ပင်လည်း အိုရမည်၊နာရမည်၊ သေရမည်၊ ဒါတွေဟာ အနိစ္စတရား(မမြဲခြင်းတရား)ဟု ပြောဆို၍ တရားကိုသာ ပြခဲ့ပါသည်)
ဗုဒ္ဓသည် ဘုရားမဟုတ်လျှင် သူ့ကို လူများ ဘာကြောင့်ဆုတောင်းဝတ်ပြုနေကြသလဲ????
ဆုတောင်းဝတ်ပြုခြင်းအမျိုးအစားများစွာ ကွာခြားကြပါသည်။ တစ်စုံတစ်စုံက ဘုရားတပါးကို ဆုတောင်းဝတ်ပြုနေသော်အခါမှာ သူတို့သည် ဘုရားကို ချီးမွမ်းတယ် အထူးအခွင့်အေ၇းအတွက်မေးတယ် ။ ပူဇော်မူတွေ ပြုလုပ်ကြတယ်။ သူတို့၏ချီးမွမ်းတောင်းလျှောက်မူ ဘုရားသခင်သည် ကြားတယ်လို့၊ ဆုတောင်းသူများကို အဖြေပေးမယ်လို့် ၊ သူတို့ပူဇော်ပေးလှူမူများကို လက်ခံမယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှာတော့ ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးမျိုး မရရှိပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ငါတို့၏ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကို ရိုသေမူကို ပြုသော် ဆုတောင်းဝတ်ပြုမူ အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
ဆရာတစ်ယောက်က အခန်းထဲကို ဝင်ရောက်လာသော်အခါ ငါတို့မတ်တပ်ရပ်ရသကဲ့သို့ ၊ အကြီးအကဲတစ်ယောက်နှင့် တွေ့ဆုံသော်အခါမှာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရသကဲ့သို့ ၊ နိုင်ငံတော်သီချင်းကို သီဆိုနေသော်အခါ အလေးပြုသကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အကြောင်းအရာများအတွက် ထိုအရိုအသေပေးမူအားလုံးများဟာ ငါတို့ခေါင်းဆောင်ကို ၊ ဝတ်ပြုမူ ၊ ညွှန်းဆိုမူပင် ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ အလေ့အထဆုတောင်းဝတ်ပြုမူ အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓရုပ်တုကို လက်အုပ်ချီ၇ှိခိုးခြင်းသည် ငါတို့၏ အတွင်းမှာ ချစ်ခြင်း၊ငြိမ်းချမ်းခြင်း ကို ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖြစ်ရန်နှင့် ထို့သို့အကြောင်းအ၇ာဟာ ငါတို့ကို ကြင်နာသောအပြုံးကို ပေးသည်။ (တလွဲပဲဗျာ ရုပ်တုကိုးကွယ်လို့ ချစ်ခြင်း၊ငြိမ်းချမ်းခြင်း ရတယ်ဆိုတာ အခုမှပဲ သိရတော့တယ် ကျတော်ခံယူချက်ကတော့ သူ့တပါးအကျိုးကို ရှာသောသူဟာ ချစ်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ရရှိစေတယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်…. အခုတော့ဗျာ ရုပ်တုကို ရှိခိုးတာ ဒီလိုရတယ်ဆိုပဲ….. ရုပ်တုကလည်း ဂေါတာမရုပ်တုပါလို့ ဘယ့်သူပြောနိုင်လို့လဲ လမ်းဘေးက ပေါက်လို့ပဲစား တကောင်ရဲ့ ပုံဖြစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ)
(၈) ဂေါတာမ၌ မိန်းမအများအပြား ကလေးအများအပြားရ ၇ှိခဲ့သည်ကို သင်လက်ခံနိုင်ရမည်။မဟုတ်ဘူးဟု ငြင်းဆို၍ ဖြစ်ရပ်အမှန်ဇာတ်ကြောင်းကို အရှက်ဖြင့် ထိမ်ဝှက်ထားလျှင် သင်၏ ရင်ထဲတွင် ဖန်တီးထားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်သာ ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ အမှန်ကိုအမှန်တိုင်း အရှိကိုအရှိတိုင်း သင့်ရင်မှာ လက်ခံနိုင်မှသာလျှင် သင်ဟာ ဗုဒ္ဓ(ဂေါတာမ)၏ ဆန္ဒ၊ရည်ရွယ်ချက်ကို နားလည်လာလိမ့်မည်။
(၉) ပိဋကတ်ကျမ်းသည် အနည်းဆုံးခြောက်ခါတိုင်တိုင် ပြင်ဆင်ပြုပြင်ရေးသားထားသော် ကျမ်းဖြစ်သည်ကို သင်လက်ခံနိုင်ရမည်။ ( ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုး ဒေါက်တာသန်းထွန်းသည် ပိဋကတ်ကျမ်းကို ခြောက်ခါတိတိပြင်ဆင် ဖူးသည့်စာအုပ်(ကျမ်းဟုပင် မခေါ်ခဲ့ဘဲ စာအုပ်ဟု သူကိုယ်တိုင်ဆိုခဲ့သောစကား)ဟု ဝန်ခံသွားခဲ့သည်။ သံဃာယနာတင်ဆိုသည်မှာ ဂေါတာမကုလား အဟောမဟုတ်၍ စပါးလုံး ရွေးထုတ်သည့်ဟု သင်အကြောင်းပြချက်ပေးမည်။ ယနေ့ခေတ်ကြီးတိုးတက်လာမှ သိပ္ပံပညာရပ်က အတိလင်းထောက်ပြနိုင်မှသာလျှင် ဗုဒ္ဓအဟော(ကုလားဂေါတာမရဲ့ အဟော) မဟုတ်ဟု ညင်းဆိုခြင်းပြုနိုင်သည်။ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ခန့် သင်ဘယ်လိုမှ မမြင်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကို သင်က ပို၍ပင် သိမလား သင့်ရှေ့ကမွေးသောနှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော်ခန့်က ဂေါတာမ၏ တပည့်များ၊ တပည့်များ၏တ ပည့်များက ပို၍ပင် သိမလားဆိုတာ မိမိကိုယ့်ကို ဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ပါ)
(၁၀) ကျတော်(ကိုယ်တော်ချော)၏ ဖော်ပြရေးသားချက်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို မလိုရှုစိမ့်ဖြင့် တမင်ထိုးနှက် တိုက်ခိုက်နေသည့်ဟု မြင်နေသေးလျှင် သင်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်နိုင်သေးချေ။
(ဗုဒ္ဓ (ဂေါတာမကုလား) ဟောစကားအရ အကြောင်းရှိလို့ အကျိုးဖြစ်လာတာဟု ပြောဆိုခဲ့သည် ဤစကားအရဆို ကျတော်ငြင်းဖွယ်ရာမရှိ သင်တို့သည်ဦးစွာအကြောင်းတရားကို ဖန်တီးခဲ့သည် (သင့်တို့တွေးခေါ်နိုင်၇န် လမ်းစ -- အခြားသောဘာသာ၊ တရား၊ ဘုရားကို သင်တို့သည် နှုတ်ဖြင့်စော်ကားခြင်း ၊ ဘာသာဝင်လူများကို ရိုက်နှက်စော်ကားခြင်း ၊ ဘုရား၏ဂုဏ်ပုဒ်များကို ပျက်ရဲပြုခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်)ဤသို့ သင်တို့သည် အကြောင်းတရားကိုစတင်ပြုစု၍ ကျတော်(ကိုယ်တော်ချော)ထံမှ သင်တို့ အကျိုးတရားကို ခံစားနေရခြင်း ဖြစ်သည်။ ရန်ညိုးဆိုတာ တုန်ပြန်မူပြုတိုင်း ဆုံးနိုင်မည့်မဟုတ်ဟု ဗုဒ္ဓ(ဂေါတာမကုလား)၏ သွန်သင်ချက်ကို သင်တို့လက်ခံလျှင် ငါတို့ကပင် စခဲ့သည် ဇာတ်လမ်း ငါတို့ကပင် ဆုံးစေမည့်ဟု စိတ်ထဲမှတ်ကာ အခြားသောဘာသာများကို စော်ကားမူအား ရပ်တန်းကရပ် အဆုံးသတ်စေခဲ့လျှင် ကျတော်(ကိုယ်တော်ချော) ထက်ဆင့် စော်ကားရာ အကြောင်းတ၇ား မရှိတော့ချေ။ (ပညာ၇ှိတို့မည်သည့်က ငြိမ်းချမ်းရေးစကား လမ်းဖွင့်လာသောလမ်းကြောင်းကို မညင်းပယ်တတ်ပေ..................)
Posted by messenger at 1:10 AM
Labels: ဗုဒ္ဓဘာသာစစ် မစစ်စမ်းသပ်နည်း, မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ